Umdlalo weLady Doll ngokusemthethweni uGunyaziwe weReality Silicone Love Dolls Dealer
I-Gamelady Doll ka-2022 iVenkile eNtsha yeSilicone yoonodoli bezesondo
The Unodoli weGamelady ngunodoli omtsha omkhulu wothando ka-2022. Ukhangeleka ngokwenyani kunoonodoli abaninzi bothando besilicone. Oonodoli bothando beGamelady banobuso obubambekayo, iimpundu ezinkulu ezithambileyo kunye nobufazi obuqinileyo. Baluphawu olutsha olonwabisayo loonodoli be-silicone, njengaye XYCOLO unodoli kwaye Unodoli weZelex, Zombini zijolise ekwenzeni iidoli ze-silicone zesini, kodwa Umahluko kukuba yinyani Oonodoli beGamelady zijolise ngakumbi kwimveliso yabalinganiswa bomdlalo ababhinqileyo.
Ukuzisa imidlalo ebonakalayo kwiNyaniso yeGamelady Doll
Ngaba unaye umlinganiswa womdlalo owuthandayo? Abasetyhini, ngokukodwa, bathanda ukuba nemizimba ephangaleleyo kunye namabele anomtsalane. Kuya kufuneka ube nemibono malunga nokuzisa ekhaya umlinganiswa wenenekazi lomdlalo wokwenyani. Ngaba ilungile? I-brand ye-GAME LADY DOLL ezisa abalinganiswa bomdlalo kwinyani.
High-ekugqibeleni Okwenyani Love Fun yokwenyani unodoli
Kufuneka uyiphawule loo nto Unodoli weSex Gamelady ineemveliso ezimbalwa okwangoku, kodwa ziqale ngeenkcukacha ezithe kratya unodoli wokwenene, aba nodoli bokwenyani bakhangeleka njengoonodoli besondo ngaphandle komdlalo, bafana nobomi. Ukuba ukhe wafuna a unodoli wesondo kumlinganiswa womdlalo, ngoku lithuba lakho lokuba ekugqibeleni ube naye. Zonke iinketho ezingagqibekanga zikanodoli we-Game Lady silicone zibandakanya: I-EVO skeleton enamehlo ashukumayo, ukwakheka komzimba okwenyani, amathambo omnwe, amabele ejeli, amashiya amiliselweyo kunye ne-eyelashes.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngubani owenza oonodoli bezesondo bokwenene? Ngaba uyafuna ukwazi ixesha elidlulileyo nelikhoyo loonodoli besini? Yonke into ofuna ukuyazi ilapha. I-urdolls inefayile yembali yedoli yesondo, yabona Ngubani Owenza Oonodoli Bezesondo.
Itshathi yokuFanekiswa kweDatha yeGamelady Silicone eneenkcukacha:
Siza kuqhubeka nokuhlaziya kwixesha elizayo, ke hlala ubukele.